Inona no ho hita any Mexico City | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Mexico City
Mariela Carril | 12/10/2021 17:00 | México, Inona no ho hita
La renivohitr'i México dia tanàna antitra, velona, ​​be mponina, mahafinaritra, manan-tantara, mahaliana. Tsy misy adjectives ho an'ny tanàna manan-danja indrindra ao amin'ny firenena, tanàna izay tsy azonao avela raha tsy mitsidika ny zava-dehibe indrindra.
Androany, ao amin'ny Actualidad Viajes, dia mirotsaka an-tsehatra izahay inona no ho hita any Mexico City. Andao hifalifaly!
2 Inona no ho hita any Mexico City
Talohan'ny nahafantarana azy hoe Mexico DF, avy amin'ny distrika federaly. Io no tanàna manan-danja indrindra amin'ny firenena sy ny ara-politika, ara-bola, ara-tsosialy ary mpizahatany. Ny daty nananganana azy dia tsy fantatra, na dia heverina aza fa manodidina ny taona 1325 izany, ny tanan'ny olona meksika izay kosa dia resy ary anjakan'ny Espaniola.
Ny Viceroyalty an'ny New Spain dia nanomboka tamin'ny 1535. Ny fahaleovantenan'i Mexico dia nitranga tamin'ny 1821 ary tamin'ny 1824 dia lasa distrika federaly ny tanàna, tsy mitovy amin'ireo fanjakana hafa mandrafitra ny firenena, ary nanjary ny fipetrahan'ny fahefam-panjakana. Tany amin'ny faramparan'ny taona 80 tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia natomboka ny fiovana teo amin'ny sehatry ny politika ary avy eo dia nanjary tsotra ny an'ny tanànan'i Mexico.
ankehitriny ireto misy toerana 35 izay nambaran'ny UNESCO ho vakoka manerantany, tranombakoka zato mahery, Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia izy no tanàna faharoa misy tranombakoka be indrindra eto an-tany aorinan'i Londres, ka azonao an-tsaina fa a mekeka mpizahatany.
Ny Zocalo no anaran'ny kianja lehibe na Plaza de la Constitución, izay Io no kianja manan-danja indrindra ary iray amin'ireo lehibe indrindra eto an-tany. Manodidina izany dia misy tranonkala manan-danja maro, ohatra ny Katedraly Metropolitan'i Mexico, amin'ny fomba barozy nasaina namboarin'i Hernán Cortés tenany teo amin'ny tempolin'i Aztec. Ao anatiny ny Crypt of the Archbishops, ny alitaran'ny Mpanjaka, ny Royal Chapel ary amboarampeo tsara tarehy.
Trano iray hafa manodidina an'i Zócalo no Lapan'ny firenena miaraka amin'ny sary hosodoko malaza an'i Diego Rivera malaza tsy fantatra. Ao amin'ny iray amin'ireo zoron'ny kianja no sisa tavela amin'ny antsoina hoe Ben'ny tanàna Templo, ny fon'ny sivilizasiona mexikanina taloha sy ny renivohitra taloha, Tenochtitlán. Ny fanjanahana Espaniôla dia nanandrana nanala ny fahatsiarovana rehetra rehefa nanangana ny tanàna, fa nandritra ny taonjato faha-XNUMX, ny fikarohana arkeolojika samy hafa dia nampiharihary izany lasa taloha izany.
Ho hitanao ny sisa tavela amin'ny piramida sy tranobe hafa ary izay hita dia ao amin'ny tranombakoka ao anatin'io toerana io, ohatra ny fanamaivanana vato an'ny andriamanibavy Coyolxauhqui, ny sphinx an'ny andriamanitra afo ary tsangambato mahatalanjona ho an'i Tlatecuhtli.
Ary koa, eo amin'ny zoro hafa amin'ny Zócalo dia misy ny Portal taloha ao Mercaderes, vondron-tranom-barotra tamin'ny taonjato faha-XNUMX, nivadika ho hotely sy fivarotana lafo vidy ankehitriny. Ny toerana tsara toerana dia ny terrasin'ny Hotel Majestic na ny fomba fijerin'ny Gran Hotel.
Ao anatin'ny afovoan-tanàna manan-tantara dia azonao atao ny mitsidika ny College of San Ildefonso, andrim-panabeazana tranainy malaza be, ary ny efitranony dia nandany ny tarehin-tsoratra toa an'i Frida Khalo sy Diego Rivera. Raha ny marina dia nivory teto izy mivady.
Mandeha amin'ny arabe mpandeha an-tongotra Madero avy eo amin'ny kianja hitanao iray amin'ireo trano avo indrindra ao an-tanàna, ilay antsoina hoe Torre Latinoamericana. Ny fomba fijeriny dia tena kilasika, fa ao anatiny misy fampirantiana maharitra, misy ny Tranombakoka bicentennial, bara iray amin'ny rihana faha-40 ary trano fisakafoanana amin'ny rihana faha-41. Ny terrasily misokatra dia amin'ny rihana faha-44.
Raha tianao ny zavakanto dia mila mitsidika ny Lapan'ny zavakanto tsara izay akaiky ny Torre Latino. Ny trano dia nanomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 1900, dia amin'ny endrika Art-Nouveau izy io, na dia Art-Deco aza no ao anatiny. Vita amin'ny marbra fotsy izy io ary ao anatiny misy sangan'asan'i Siqueiros, Diego Rivera na Rufino Tamayo. Ho fanampin'izany dia miasa ao anatin'ny Museum of Architecture sy ny teatra ahafahanao manatrika fampisehoana malaza iray tena nasiana paty ho an'ny mpizahatany: ny Ballet Folkloric any Mexico.
Raha tianao manokana i Diego Rivera sy ny asany dia azonao atao ny mitsidika ny Mozea Diego Rivera Mural izay eo amin'ny faran'ny Alameda Central, lalan'ny loharano sy maitso. Ho an'ny zavakanto bebe kokoa dia misy ny National Museum's Museum, manoloana ny Plaza Manuel Tolsá miaraka amin'ireo fanangonana zava-kanto sarobidy izay manomboka amin'ny faha-XNUMX ka hatramin'ny taonjato faha-XNUMX.
Ny fitsidihana tanàna iray dia midika foana hoe mihetsika, mandeha, mihetsika. Eto, ankoatry ny afovoany, ny hatsarana dia hita ao faritra samy hafa. Iray amin'izany Coyoacán, atsimon'ny tanàna. Izany dia Tanànan'ny Bohemian, toerana misy mpanakanto sy trano fanjanahantany, misy tranombakoka, tsena, fivarotam-boky, fivarotana kafe. Eto no misy ny Trano manga an'i Firda Khalo sy renirano Diegoa, tranombakoka ankehitriny, fa misy ihany koa ny Tranon'i Leon Trotsky House, la Trano Hernán Cortés, ny zaridaina zato taona na ny trano monisipaly.
Ny faritra hafa atoro sy tsara tarehy dia ny Condesa sy Roma, miaraka amin'ireo arabe voaravaka hazo tsara tarehy sy trano misy fomba maritrano, fivarotana, kafe, barazy mahazatra. Eto no ahitanao ny tsara indrindra amin'ny Kanto an-tanàn-dehibe meksikana na street art. Mba hankasitrahana izany dia azonao atao ny misoratra anarana a fitsidihana bisikileta notarihina izay mitondra anao hamaky ny vazan-tanàna.
Mandeha dia azo antoka fa hahatratra ny Plaza an'ny kolontsaina telo, Kolontsaina Espaniôla, satria misy ny paroasy mpanjanatany sy ny kôngregasiôna, ny kolotsaina Tenochtitlán miaraka amin'ireo rava sy piramidany ary ny kolontsaina Meksikana maoderina miaraka amin'ny Ivon-toeran-kolontsaina University. Hafahafa ny mahita ny zava-drehetra amin'ny toerana iray, fa tsara amin'ny fomba fijerin'ny mpizahatany.
Raha katolika ianao ary tianao ny olomasina, Mexico dia mitovy dika amin'ny Virjin'i Guadalupe ary avy eo mitsidika ny Basilika any Guadalupe adidy izany. Ny Virjin'i Guadalupe dia olo-masina mpiaro ny tanàna, ny firenena ary Amerika Latina. Vita tamin'ny 1709, na dia tamin'ny 1976 aza ny ampahany vaovao. Olona 20 tapitrisa no mitsidika azy isan-taona.
Raha te-hahita kolontsaina ianao ary handeha hiantsena dia mila manararaotra ny tsena ianao ary amin'io lafiny io no tena atolotra anao ny Tsenan'i San Juan. Ity toerana ity dia ao afovoan-tanàna ary manana zato sy sasany androm-piainana. Misy ny zava-drehetra manomboka amin'ny vokatra sakafo mahazatra sy ivelany, ao anatin'izany ny bibikely, hatramin'ny vokatra vita amin'ny ronono sy ny delestazy.
Meksika dia mitovy dika amin'ny revolisiona ihany koa, mba hahafantarana ny hetsika fahaleovan-tena Meksikana tokony halehanao Tsangambaton'ny revolisiona, rafitra goavambe sy manaitra ao anatin'ny Plaza de la República. Momba ny a mausolika natokana ho an'ireo mahery fo meksikana, Pancho Villa ao amin'izy ireo. Misy koa ny Tranombakoky ny Tolom-piavotana, ny fomba fijery antenantenany izay mahatratra efa ho 66 metatra, eo an-tongony ireo andry misy tarehimarika savoka, sy ilay antsoina hoe Paseo Linternilla miaraka amin'ireo fonenany.
Mifandray amin'ny fahaleovan-tena koa, ao anatin'ny Paseo de la Reforma, ny Anjelin'ny fahaleovan-tena, tandindon'ny firenenal. Manomboka amin'ny 1910, taona fahaleovantena nasionaly, ary manana ny andriamanibavin'ny fandresena amin'ny alimo miaraka amin'ny volamena. Ity làlana ity no lehibe indrindra amin'ny tanàna, manana 15 kilometatras, mikasika ireo toerana manan-danja maro amin'ny diany.
Amin'ny alina, ao amin'ny Loharanon'ny taonjato faha-XNUMX ao amin'ny Plaza de la República, ny seho maivana ary mozika. Ary miresaka ny alina, rehefa milentika ny masoandro dia toerana tsara no iantsoana faritra mavokely izay ao Colonia Juarez.
Hay trano fandraisam-bahiny, trano fisotroana, trano fisakafoanana, trano fandihizana ary mpizahatany maro, satria ny fialamboly no resahina. ity ny sehatra pelaka Ary afaka miala eto ianao mankany amin'ny manodidina an'i Roma Forte mandehandeha eny Glorieta de los Insurgentes, iray amin'ireo lalana manodidina ny mpandeha an-tongotra eto an-tanàna.
Ny toerana farany nefa tsy azo odiantsy, toerana hafa izay tsy azonao adino amin'ny lisitra androany momba ny zavatra ho hitanao any Mexico City: ny Castle chapultepec, fonenana taloha an'ny Emperora Maximilian tamin'ny 1864, miaraka amin'ny fanaka sy ny haingo tamin'izany fotoana izany, ny Tranombakoky ny Tantara Nacional (ao anatiny sy misy fitsidihana mitarika raha tianao), ny Ala Chapultepec 500 hektara, goavambe, misy tranombakoka, farihy ary trano fisakafoanana, lehibe sy sarobidy National Museum of Anthropology of Mexico (Eto no misy ny Vaton'ny Masoandro, ny volon-dohan'i Moctezuma, ny dika mitovy amin'ny fasan'ny Mpanjaka Pakal, teratany Palanque miaraka amin'ny sarontava amin'ny jade, na ny Mayan Room.
Ho an'ny fitsangatsanganana mahafinaritra sy kanto dia misy ny Tanànan'ny Polanco, fonenan'ireo masoivoho maro, ho an'ny fitsangantsanganana amin'ny toerana mangina dia San Ángel sy Chimalistac, ny Lakandranon'i Xochimilco, hiditra trajineras miloko ary zahao ny tsena na ny Museum Dolores Olmedo miaraka amin'ny fanangonana maro ny sanganasan'i Rivera, ary mazava ho azy, ny toerana arkeolojika an'ny Teotihuacán miaraka amin'ny piramidan'ny masoandro sy ny volana, ny trano mimanda, ny lalan'ny maty sy ny hafa. Bisy no hanatonana azy.
Mazava ho azy, ity lisitra nandrisihana antsika ity ity dia santionany amin'ny zavatra atolotry ny tanàn-dehibe Mexico sy mahafinaritra ho an'ireo mpitsidika azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » México » Inona no ho hita any Mexico City
Inona no ho hita any Jaipur